Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Taxanaha Xabagta-Shiinaha ee Taxanaha Xabagta
Taxanaha Sanduuqa Iftiinka
Bandhiga Taxanaha Props
Iibinta kulul 0.61m 140gsm Midabka Isku Dheelaha ah ee PVC Film Computer Goynta Plotter Vinyl
Midabka Goynta Vinyl waa nooc dhejis isku dhejisan, badanaa wuxuu ka kooban yahay PVC, filim PET oo midabyo kala duwan leh, koollada xasaasiga ah ee cadaadiska iyo warqad kraft ah oo PE ah. Waxaa loo gooyaa xaraf kasta, calaamad ama qaab gaar ah iyadoo la jarayo sawir-qaadaha, calaamada gudaha/dibadda oo si weyn loo isticmaalo, qurxinta dusha sare oo leh xarfo midab leh iyo garaafyo.
Midab dhalaalaya Goynta Vinyl-ka, Kumbuyuutarka PVC Plotter DIY Midabka Goynta Vinyl Rolls ee Calaamadaha
Vinyl-ka Midabka Isku Dheeha ah, Saxeexa Samaynta Filim Vinyl, Goynta Vinyl-ka ee Goynta Qoryaha/Waxyaabaha Goynta Midabka leh ee Vinyl-ka
0.61 / 1.22m oo tayo sare leh oo goynta ah filimka sawir-qaade waa nooc ka mid ah walxaha filimka goynta laga sameeyay lakabka shaqeynaya, lakabka dhejiska iyo warqad silikon. Vinyl-ka MOYU ee goynta ayaa leh hanti koollo heersare ah, mana jirto wax koollo ah oo ku haray guuritaanka ka dib. Waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo hoos yimaada xaalad kasta.
Filimka PVC Vinyl ee Joogtada ah ee Xabagta Hologram Opal Vinil Cut Plotter Folie Vinyl stickers Rainbow Lazer Vinyl
Magaca badeecada: Xabagta Calaamada Holographic Craft Vinyl Hologram stickers Roll Holographic Vinyl Material: PVC Dhumucda Dhumucda 0.07-0.08mm Cabbirka: 0.305 * 1.52m / 0.305*200m PVC Dhumucdiisuna: 70-80 micron Xabagta: 3000m : 1 sano la heli karo Midabka: madow, caddaan, oranji, casaan, jaalle, iwm wadar ahaan 35 midab Isticmaalka Advertising, Saxiixa samaynta, Promotion Features: 1) Vinyl-koolo ah goynta plotter labada dhalaalaya iyo matte.2) Xalalka cadaadiska perman xasaasi ah. ..
Wax-soo-saarka Shiinaha Qiimaha Kulul Iibka Daloolin ee Xabagta Vinyl Hal Way Aragga Vinyl Eeg Dhexdeeda
Cad Hal Daad Aragti Laba Jid Aragti Midab Hal Jid Aragtida Gray back One Way Vision
Filimka Hal Wayn waa vinyl-daloola oo iskiis isku dhejiya, waxaana lagu daabacayaa sawirada daaqadaha, xayeysiinta gidaarka muraayadda, kaas oo laga arki karo dhinac, laakiin aan ka muuqan dhinaca kale, si loo bixiyo meel gaar ah.
Eco Solvent Matte Printable Baabuurka Istiikaara Istiis Dheecaan Cadaan/Madaw/Cawlan Filim Duubabka Vinyl-ka Oo Loogu Talagalay Kor-u-qaadista Dibadda ee PVC Vinyl
Vinyl-ka-isku dhejinta wuxuu ka kooban yahay filim PVC ah, koollada xasaasiga ah ee cadaadiska iyo xaashida kraft-ka ee PE-da ayaa inta badan loogu talagalay daabacaadda dhijitaalka ah, waxay bixisaa dusha aadka u jilicsan, oogada la daabacan karo oo loogu habeeyay isticmaalka khad.
40um–500um 3D Lamination Dabaqa Lamination Sawirka Sawirka
Film Lamination Cold waa filim hufan oo isku dhejisan oo PVC ah, oo ay ku jiraan dhalaalaya, matte, satin, kaas oo lagu dhejin karo dusha sare ee warbaahinta xayeysiiska ee daabacan si loo ilaaliyo sawirka. Filimka qabowgu wuxuu isticmaalaa dhejisyo xasaasi ah oo cadaadis ah, wuxuu bixiyaa dhejis heer sare ah iyada oo aan la isticmaalin kulayl, waxaa lagu dhejin karaa noocyo kala duwan oo qalab xayeysiis ah, sida PP Paper, Vinyl Sticker, Photo Paper, ect. Waa hab wax ku ool ah oo qiimo jaban ah oo garaafyada looga ilaalin karo xoq, wasakh ama qoyaan, waxay sii dheerayn doontaa garaafyada 'iyadoo la isticmaalayo nolosha. Filimka dhalaalaysa qabow ee dhalaalaya ayaa awood u siin doona iftiinka garaafyada, filimka qaboojiyaha qabow ee 3D wuxuu ka dhigi doonaa garaafyada dareenka stereo, qaababka gaarka ah ee filimka lamination ayaa kor u qaadi doona saameynta farshaxanka.
Filimka daaqada matte ee dhaxan dib loo isticmaali karo
Sifeynta Meesha Asal ahaan: Shiinaha Magaca Alaabta: Filimka daaqada matt ee dib loo isticmaali karo Daaqadaha guriga / albaabka muraayadda Xafiiska Shaqada: Qurxinta, Qarxinta-ilaalinta, Faa'iidooyinka ilaalinta Qarsoodiga ah: ● Waxay abuurtaa ...
Filimada Daaqadda Qarsoonnimada ee laga saari karo Istiikarada Ilaalinta Nakhshadeysan ee Guriga
Nooca: Magaca MOYUProduct Dhererka dhalaalaya: 45cm 60cm 90cm. Inta u dhaxaysa 620mm iyo 920mm waa la habeeyey Dhererka: 50m, 100m, 150m, 200m, 250m Codsiga: Guriga albaabka, musqusha, qolka jiifka, ki ...
Isku dhejinta Vinyl Rolls waa nooc ka mid ah walxaha filimaanta la daabici karo kaas oo lagu daboolay lakab shaqeynaya, lakabka koollada iyo warqad silikoon. Waxaa daabici kara Solvent, Eco-Solvent, UV iyo daabacaha Latex. Faa'iidooyinku waa degdeg engegan, laga saari karo, waara, dabacsanaan iyo xasilloon. Baakadaha waxaad isticmaashaa sanduuq kartoon oo lakab ah oo ka kooban 5 lakab kaas oo istaagi kara in ka badan 100kg. Waxaad ka heli doontaa qalabka ugu habboon daabacahaaga halkan.
Filimka qaanso-roobaadka ee PET, Filimka Dichroic Midabka qaanso-roobaadka ee aan biyuhu ilaalinayn ee jilicsan
Sifeynta Brand MOYU Alaabta Magaca iskeed koollada aan biyuhu lahayn ee qorraxda ka hor imaanaya filimka qaansoroobaad qurxinta ee walxaha Qalabka PET Dhumucdiisuna 2 mil Midabka Rinbow Dabayl midab leh 1.38m Dhererka Habee Qaabka is-ku dhejinta, Codsiga Qurxinta Shaqada Biyaha ee aan biyuhu Karin , Taageerida hal-abuurka DIY, iwm Xidhidhinta Hal duub oo hal kartoon dhoofin MOQ 600m Faa'iidooyinka: 1. In ka badan 10 sano taariikhda gudaha ...
Qiimaha warshadda Shiinaha Filim qabow oo dhalaalaysa oo tayo sare leh,Qiimaha filimka qabowga, duubka filimka qabowga
Nooca: Magaca MOYUProduct Taageerada madow iyo caddaanka: 100g, 120g, 140g nooca xabagta: Waxay noqon kartaa khad joogto ah oo laga saari karo: Solvent / Eco-solvent / UV / Screen Printing / Latex Nalalka Sare: Dusha siman / Iska caabinta Cimilada / ...
Daaqad Filim Istiikaro Daloolan oo Daloola PVC-ga Sawirka Hal Jidka Aragtida/OWV ee Daabacaadda Ecosolvent
1. OWV waxay bixisaa xayaysiisyada daaqadaha iyo qurxinta
2. Garaafyada OWV waa la arki karaa si cad laakiin dhinaca kale lagama arki karo.
3. OWV waxay bixisaa gudbinta 40% sidoo kale muujinta midabada leh ee sawirka iyo 60% mugdiga.
4. OWV waxay ku siin kartaa garaaf heersare ah oo ku saabsan xayaysiisyada daaqada
5. Karti wanaagsan oo ka hortag ah waxay ka hortagtaa qallooc iyo dillaac.
6. Gaar ahaan daabacaadda UV waxay ka dhigi doontaa garaafyo mid muuqda oo u muuqda mid soo jiidasho leh